Window maneja, desktop desktop, graphical server ndeapi iwo? | Linux Vakapindwa muropa
KDE, GNOME, X11, Wayland, X.org Server, Compiz, ... mazita mazhinji ezvinhu zvakasiyana. Uye ndezvekuti vashandisi vasina ruzivo mune ino nyaya vanogona kumhanya mune kumwe kusahadzika pavanosiya Microsoft Windows kana Apple Mac OS X maererano ne mifananidzo yakajeka.
Mune masisitimu eMicrosoft neApple, nharaunda dzakajeka dzakachinja zvishoma, nharaunda Aqua Kubva Mac kana ndima kubva kuMwedzi (Windows XP) kuenda kuAero (Vista na7) uye gare gare kuenda kuMetro UI (Yemazuva Ekushandisa Mushandisi) muWindows 8, zvine zvazvinoita kune vashandisi veaya masisitimu anoshanda.
Mune masystem * nix mahara Izvi zvinogona kuve zvakanyanya kuomarara nekuti isu tinofanirwa kubata akawanda mazita epurojekiti masisitimu akasiyana anowirirana uye anotipa huwandu hwakawanda hwedzimwe nzira. Asi isu tinofanirwa kusiyanisa pakati pescreen server, GUI kana graphical mushandisi interface (desktop nharaunda), hwindo maneja, nezvimwe.
El desktop nharaunda iko kuiswa kweiyo graphical mushandisi interface izvo zvinotibvumidza isu kuwana mukana uye nekugadzira kumisikidza mumidziyo yedu nenzira yakajeka. Iyo chaizvo ine basa rakafanana neiyo terminal, chete zvese zvinoitwa graphic. Mupfungwa iyi tine nharaunda dzinoverengeka dzemahara, senge KDE, GNOME, CDE, Xfce, LXDE, Kubatana, LXDE, Cinnamon, nezvimwe.
El hwindo maneja ndiyo software inoona nezvekuratidzira windows mumasisitimu neGUI. Saka yega desktop desktop ichada maneja windows kugadzira iyo graphic mhedzisiro uye kuratidza windows. Panyaya iyi tinowana mazita akadai seMetacity, Mutter (ese ari maviri anoshandiswa muGNOME), KWin (yeKDE), Compiz, XFWM (XFCE), Enlightenment (yeE16 kana E17), Blackbox, IceWM, UltimateWM (inosangana neiyo chirongwa cheUDE ), Fluxbox, JWM, Openbox, FVWM, Virtual Tabbed WM, AfterStep, WindowsMaker, Matchbox, DynamicWM, HaZe, nezvimwe.
Pakupedzisira iyo kuratidza maseva. Iyo screen server chirongwa chinogadzirisa uye chinogadzirisa zvigadzirwa uye zvinobuda zvevatengi vayo, uye izvi zvinozadzikiswa nekutenda kune yekutaurirana protocol ichive chakakosha chikamu cheGUI. Sevharanda dzescreen isu tine X.org inonyatso kuzivikanwa muLinux nyika, kuwedzera Wayland, SurfaceFlinger (yeApple), inozivikanwa uye nyowani Mir (kubva kuCanonical yeUbuntu), nezvimwe. Ese aya maratidziro ekuratidzira anoshanda seimwezve chinhu chemaneja emawindo anoonekwa mundima yapfuura.
Ndinovimba ndatsanangura chimwe chinhu kwauri uye handina kukukanganisa zvakanyanya ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Tsananguro pfupi pane yemahara graphical nharaunda
Tsananguro yakanaka kwazvo, zvese zviri pachena, kudzamara ndanzwisisa
Errno.h zvishoma yeUnix / Linux nhoroondo